Mpanamboatra kojakoja elektrônika tsy misy fipoahana sy korosi - Shina Mpamatsy sy orinasa mpanamboatra fitaovana elektrika mipoaka
BF 2 8158-S andian-dahatsoratra Explosionerosion-porofo fandidiana post
1. Ampiasaina betsaka amin'ny tontolo entona mirehitra sy mipoaka toy ny fitrandrahana solika, fanadiovana, orinasa simika, solika any ivelany
sehatra, tanker solika, sns. Ampiasaina amin'ny toerana vovoka mora mirehitra toy ny indostrian'ny miaramila, seranan-tsambo, fitehirizana vary ary fanodinana metaly;
LA5821 andian-dahatsoratra Bokotra fanaraha-maso tsy mipoaka
7. Ampiasaina ho fohy-circuit na hanaisotra ny kely amin'izao fotoana izao circuit ao amin'ny fanaraha-maso ny baiko baiko hifehy ny herinaratra vondrona toy ny contactors sy relays.
BF 2 8159-S andian-dahatsoratra Explosioncorrosion-porofo fahazavana (hery) boaty fizarana
7. Fizarana herinaratra ho an'ny jiro na tariby herinaratra, fanaraha-maso ny fitaovana elektrônika on/off na Jereo ny fikojakojana sy fizarana.
BF 2 8158-S andiany Explosioncorrosion-porofo boaty fanaraha-maso
7. Ampandehano amin'ny lavitr'ezaka ny fitaovana elektromagnetika na fehezina ankolaka ny motera maromaro eo amin'ny manodidina ny motera voafehy, ary diniho ny fiasan'ny faritra voafehy amin'ny alalan'ny fitaovana elektrika sy jiro famantarana.
BF 2 8159-S andian-dahatsoratra Explosioncorrosion-proof circuit breaker
7. Amin'ny maha-fitaovana elektrika sy elektronika sy jiro, dia azo ampiasaina amin'ny motera elektrika ihany koa.Ny fanombohana tsy dia matetika sy ny enta-mavesatra, ny circuit fohy ary ny fiarovana ny motera ambany.
BJH8030/series Fipoahana & corrosion-proof junction box
7. Izy io dia ampiasaina hampifandraisana jiro, herinaratra, tsipika fanaraha-maso, telefaona, sns.
8050/11 andian-dahatsoratra Fipoahana & corrosion-porofo master controller
7. Ampiasaina ho fampitana baiko sy fanaraha-maso ny sata.
BF 2 8158-S andiany Fipoahana & corrosion-proof junction board